लाइभ ब्ल्याकजेक गाइड - कालोज्याक लाइभ (2022)
मुख्य	/ बदलाव	/ लाइभ ब्ल्याकज्याक खेल्नुहोस्
प्रत्यक्ष क्यासिनो ब्ल्याकज्याक
कालोजेकको खेल द्रुत रूपमा विकसित भएको छ। आज, बालज्याक लाइभ अनलाइन क्यासिनोको एक मुख्य एक मुख्य हो, र यो विकसित हुँदै गएको छ कि एक उत्तम ब्ल्याकज्याक खेलहरू खेल्नको लागि। जब प्रत्यक्ष ब्ल्याकज्याक अनलाइन केहि नियम परिवर्तन गर्दछ, धेरै खेल अक्षुण्ण छ। हेरौं।
प्रत्यक्ष ब्ल्याकजेकको आधारभूत
त्यहाँ धेरै छैन कि लाइभ ब्ल्याकजेक र अन्य संस्करणहरूको खेल बीच फरक छैन जुन तपाईंले अनलाइन अनुभव गर्नुहुनेछ। यहाँ कुञ्जी भिन्नता छ कि तपाईं प्रत्यक्ष डीलरको कम्पनीमा खेल्नुहुन्छ र अझै पनि खेलको आनन्द लिनुहोस्, जबकि परम्परागत अनलाइन संस्करण केवल सफ्टवेयरसँग खेल्दछ। यहाँ नोट गर्न केहि चीजहरू छन्:
प्रत्यक्ष ब्ल्याकज्याक घरको बिरूद्ध खेलाडीसँग खेलेको छ
प्रत्येक खेल दुई र आठ डेक बीच सुविधा हुनेछ
फेरि, तपाइँले बुस्टिंग बिना 21 अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ
दुई र नौ बीच सबै कार्डहरूले उनीहरूको अनुहार मान राख्नुहोस्
दश देखि राजाको लागि सबै कार्डहरू 10 अ pacts ्कको लायक छन्
एक एसी परिस्थितिमा निर्भर 1 वा 11 अंकहरूको लायक हुन सक्छ
यहाँ केहि अन्य साना मतभेदहरू छन्। प्रत्यक्ष अनलाइन ब्ल्याकजेक खेलहरू सामान्यतया दुई नियम हुन्छन्, क्यासिनोमा निर्भर गर्दै, प्लेयरको कार्डका लागि। तिनीहरू अनुहार तल वा सामना गर्न सक्छ।
यद्यपि डिलर लगभग निश्चित रूपमा एक कार्डको सामना गर्नेछन् र एक कार्डको सामना गर्नुहोस्। दोस्रो कार्ड प्राय: खेल्दैन जब प्लेयरले उनीहरूले के लिनेछ भनेर निर्णय गरिसकेपछि खेल्छन्।
सबै भन्दा राम्रो लाइभ ब्ल्याकजेक क्यासिनो साइटहरू
तपाईं कसरी प्रत्यक्ष ब्ल्याकजेक खेल्नुहुन्छ?
अब जुन हामीले लाइफब्याकजेक अनुभवका केही आधारभूत अनुभवहरू सफा गरेका छौं, यो समय नजिकै हेर्नुहोस् कि तपाईं कसरी खेल्नुहुन्छ। किनकि तपाईं ब्ल्याकजाक अनलाइन लाइभ खेल्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ नियमहरूमा केहि साना समायोजनहरू छन्, तर समग्रमा, प्रक्रिया सीधा छ। हेरौं।
एक खेलाडीले भाँडामा जितेको छ यदि ऊसँग एक प्राकृतिक ब्ल्याकजेक (10-पोइन्ट कार्ड + Ace) छ)
यदि एक खेलाडी र डीलर दुबै कालोजेक छ भने, खेल "धक्का" मा जान्छ
या त पार्टी हराउनेछ यदि उनीहरू बस्ट हुन्छन्, त्यो उनीहरूको हात 21 पोइन्ट भन्दा बढी हुन्छ
जहाँसम्म, यदि एक खेलाडी प्रारम्भिक हात 21 बुँदे भन्दा कम छ भने, तिनीहरू यहाँबाट कार्यहरूको धेरै भिन्न पाठ्यक्रमहरूको पछि लाग्न सक्छन्। मूलतः खेलाडीहरूलाई सोधेर सोधिएको छ कि तिनीहरू हिट, उभिएर, विभाजित, वा आत्मसमर्पण गर्न चाहन्छन्। यहाँ प्रत्येकको लागि संक्षिप्त विवरण छ:
हिट: अर्को कार्ड खेलाडीलाई व्यवहार गरिएको छ।
खडा हुनुहोस्: खेलाडी आफ्नो हात संग खुशी छ र अधिक कार्डहरु को लागी छैन।
डबल तल: खेलाडी उनीहरूको कार्डमा विश्वस्त हुन्छ र शर्त दुई-गुणा को आकार बढाउन चाहन्छ।
विभाजित: खेलाडीले उनीहरूको सुरूवात हातलाई दुई छुट्टै हातमा विभाजित गर्ने निर्णय गर्दछ र नयाँ हातलाई समान रकमको साथ फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दछ।
आत्मसमर्पण: एक खेलाडीले जित्ने उपाय देख्दैन। तिनीहरूले समर्पण गर्छन् र आधा फिर्ता आफ्नो आधा निको हुन्छन्।
एक पटक खेलाडीले निर्णय लिइसकेपछि कालोज्याक अनलाइन लाइफको खेल प्रत्यक्ष डीलरसँग दोस्रो कार्ड प्राप्त गर्दै। यहाँ कारक पनि यहाँ कारक गर्न केहि अन्य रोचक नियमहरु छन्:
एक पटक सबै चालहरू खेल्छन्, हातहरू तुलना गरिन्छ
यदि दुबै हातले समान मान हुन्छ भने, यसले धक्का दिन्छ, र तपाईं आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुहुनेछ
खेलाडीले पैसा कमाउनको लागि पनि जित्न सक्दछ यदि विक्रेता बस्टहरू
अधिक प्रत्यक्ष ब्ल्याकज्याक नियमहरू
लाइभ ब्ल्याकजेकको खेललाई जित्न कुञ्जी भनेको यसका नियमहरूको बारेमा तपाइँले गर्न सक्ने सबै चीजहरू पत्ता लगाउनु हो। यहाँ विचार गर्न धेरै कुरा छन्, तर हामीले छिटो र पहुँचयोग्य ढ imp ्गमा जान्नुपर्ने सबै सूची सूचीकृत गरेका छौं। ब्ल्याकज्याक अनलाइन लाइभ डीलर धेरै खेलहरू भन्दा फरक हुनुहुन्न, र यो हैन। यहाँ आवास ब्ल्याकजेक डिलर खेल प्रस्ताव को प्रस्ताव छ।
प्रत्यक्ष डीलर ब्ल्याकजेक ब्ल्याकजेक दुई देखि आठ doks को साथ खेलेको छ
डकहरू कार्ड गणना विकल्पहरू कम गर्न प्रत्येक राउन्ड पछि सच्याइन्छ
यदि दुबै खेलाडीहरूसँग समान हातहरू छन् भने, खेल एक धक्का छ
डिलरले जहिले पनि 1 doints अ points ्कको लागि एक हात हिट गर्दछ
डीलर नरम 1 hold हातमा खडा हुनेछ
खेलाडी एक हात एक पटक विभाजित गर्न सक्षम छ
यद्यपि, प्लेयरले 10 अंकलाई bssssss, ors ors वा कार्डहरू विभाजन गर्न सक्षम हुनेछैन
खेलाडीहरू सञ्चेलन गर्न सक्षम हुँदैनन्
खेलाडीहरू केवल 9, 10 र 11 मा डबल गर्न सक्छन्
सबै स्प्लिट कार्डहरू र नतिजाको परिणामहरू एक डबल शर्तको लागि योग्य छन्
यदि एक डीलर एक अनुहार-अप एएसी छ, खेलाडीहरू अब समर्पण गर्न सक्दैनन्
अनलाइन ब्ल्याकज्याक लाइभ डीलर स्टोरमा कहिल्यै कुँदने छ। अर्को शब्दहरुमा, तपाईं यी केहि नियमहरु को लागी अलिक फरक हुन को लागी आशा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको लागि धन्यबाद, अनलाइन क्यासिनोहरूले जहिले पनि प्रत्येक विशेष सूचीको साथ प्रस्तुत गर्ने प्रत्येक खेलको साथ आशा गर्ने सब भन्दा विस्तृत सूचीमा तपाईंलाई प्रस्तुत गर्ने।
कसरी लाइभ ब्ल्याकजेक पेआउट को एक खेल?
यहाँ भुक्तानी गर्न वास्तवमै धेरै सजिलो छ। तपाईंको पैसा पनि पेआउटका लागि, अनुपात 1: 1 हो। कालो जनताले 3:2भुक्तान गर्नेछ, र एक बीमा शर्त 2: 1 को दरमा बीमा बर्तन भुक्तान गरिनेछ।
प्रत्यक्ष ब्ल्याकजेक रणनीति: के थाहा पाउने
समझदार छ, तपाईं प्रत्यक्ष डीलर ब्ल्याकजेक खेल्न राम्रो हुन चाहानुहुन्छ। यहाँ औसत घर किनारा 0.42% छ, र केहि साना नियमहरूको बाबजुद, जुन औसत फाइदा हुन्छ। यो घर किनारा खेलहरूमा लागू हुन्छ जुन and र doins ड्रिक बीच केहि पनि सुविधा दिन्छ।
त्यहाँ आमन्त्रित ब्ल्याकज्याक डीलर खेल्न खोज्दा त्यहाँ केहि चीजहरू छन्। स्टार्जरको लागि, तपाईं डिलर 10 को बिरूद्ध 11 मा डबल तल जान चाहनुहुन्न। यद्यपि, तथापि, वा 11 मा डबल गर्न सक्नुहुन्छ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि ड्रेलिंग डाउन वा विभाजन तल झर्ने वा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईं डिलर एसको बिरूद्ध खेल्दै हुनुहुन्छ।